Saldhiga Magaalada Boosaaso Oo La Weeraray. – Bogga Calamada.com
Saldhiga Magaalada Boosaaso Oo La Weeraray.
Wararka laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari waxey sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacay gudaha magaalada kaasi oo laga helayo faahfaahin hor dhac ah.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si toos ah u weeraray saldhiga ciidanka ee loo yaqaano Bartamaha kaasi oo ku yaala meel u dhaw dekada magaalada Boosaaso halkaasi waxaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud.
Dhawaaqa rasaasta dagaalka waxaa si aad ah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso si rasmi ahna wali looma xaqiijin khasaaraha maleeshiyaatka maamulka Ashahaado la dirirka Puntland lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Weerarkan culus ee lagu qaaday saldhiga magaalada Boosaaso waxa uu imaanayaa xilli dhawaan qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug lagu dilay Gaashaanlle Sare Faarax Ciise Samatar oo ku magac dheeraa Faarax Caato oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaay Sirdoonka Putland islamarkaana sidoo kale ahaa Tababare Sare oo dhanka Sirdoonka ah.